Indlunkulu – iAfrika
Kulamakhasi adlule sibhunge indaba yenhlonipho ekhaya noma egcekeni, sibala igceke, isibaya sezinkomo kanye nendlu. Kuleli khasi ke sibheka indaba yendlu ebizwa ngendlunkulu mayelana nendaba yokuhlonishwa kwayo. Sikubalulile ekuqaleni ukuthi indlu ebalulekile ekanina wendodana, yona ke ilandelwa indlunkulu ngokubaluleka, njengoba kuyiyona eyinhloko yomuzi, okuyindlu yomnumnzane.
Abasifazane abangenangeni kulendlu, kodwa kungena undlunkulu ngokuzolungisa indlu ngisho ukushanela kanye nokusinda. Kulendlu ke ila okugcinwa khona imikhonto yokuhlaba izinkomo zemisebenzi yabadala, lendlu iphinde ihlale inyama uma kuhlatshiwe kanti ke nezindaba ezibalulekile zekhaya zidingidwa kuyo lendlu. Nakomkhulu ebukhosini indlunkulu kungena izinyanga nezanusi kanye nezikhulu zombuso.
Izinto ezingena endlunkulu
Kuyo futhi lendlu kuhlala khona umkhonto wokubusa isizwe kanye ke nomzamana lenduku esetshenziswa uma kukhonjwa amabutho akwaZulu. Kulendlu kuphinde kuhlale inkatha yesizwe kanye nokhamba lwentelezi yesizwe. Kanti ke nesigqiki esikhulu sobukhosi sihlala kuyo lendlu. Lesigqiki isiqukaquka somuthi ogwedwe kahle noma obazwe kahle waba isihlalo. Okuthi nazo izikhumba zezingwe nezezingonyama zihlala kuyo lendlu.
Kuningi okufakwa endlunkulu okwasebukhosini njengoba nezimpondo zezinkabi kanye nezinyathi zihlala khona la endlini. Kanti ke nenkosi nayo uma imiswa, imiswa kuyo lendlu, noma isikhothama ikhothamela kuyo lendlu. Uma kunemikhosi yesintu noma kuzophuma impi iyohlasela, inkosi ilala kulendlu lapho iqiniswa khona izinyanga ziyigqumisa, ziyiphalazisa kwenzelwa nokuthi ikhothwe nangamathongo.
Indlunkulu ihlukaniswe kanjena, ngaphandle komnyango kunesibuya esivikela ukubhenguza komoya esibizwa ngokuthi iguma. Ukubakhona kweguma kwenza ukuba kuvalwe unobhadula, kungene ukukhanya nomoya endlini. Bese kuthi maduze neguma kubakhona indawo yokuhlala izincanga ebizwa ngokuthi isithumbanjeni bese kuba umnyango wayo indlu.
Tags indlunkulu, Inhlonipho, Izindlu